आकर्षक पुतलीहरु अनलाइन स्लॉट खेल 20 भुक्तानी रेखाहरू,3पङ्क्तिहरू, र5रिल्सको साथ आउँछ। यस अनलाइन क्यासिनो स्लटमा तपाइँ सुन्दर तितलियों को प्रशंसा गर्न सक्छन् र एकै समयमा ठूलो पुरस्कार सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ!
यस स्लॉट खेलमा थुप्रै अतिरिक्त प्रतीकहरू छन् जुन तपाईंलाई वास्तवमा असल पुरस्कार जित्न मद्दत गर्न सक्छ। फूलको प्रतीक स्क्याटर प्रतीक हो, त्यसैले यसले रिसेल्सको स्थितिमा निर्भर गर्दैन र तपाईंलाई रिलेहरूमा कहीं पनि देखा पर्नेछ, तपाईलाई winnings ल्याउँछ। यस खेलमा गृह चिन्ह जंगली प्रतीक हो। यो फूल चिन्हको लागी कुनै खेल चिन्हको लागि प्रतिस्थापन गर्दछ। एक पल्ट गृह प्रतीक पहिले रील तितली टोपी मा कुनै पनि स्थिति मा प्रकट हुन्छ र विभिन्न प्रतीकहरुमा लैंडिंग रिले भर मा उक्लन्छ। केहि पनि हाउस प्रतीकहरुमा बदलिन्छ। यदि तपाइँ आफ्नो भाग्य कोसिस गर्न मनपर्छ र कुनै सफल स्पिन पछि पुरस्कार बढाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यस भिडियो स्लटमा संलग्न मिनी जुम्बल खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। खेल प्रविष्ट गर्नुहोस् र रिल्सको सट्टा कार्डहरूको डेक देखा पर्दछ। तपाईं या त कार्ड रंग वा कार्डको सूटमा जुवा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले रंग अनुमान गरेपछि, तपाईंको पुरस्कार दुग्ध हुनेछ। र सही सूट चार द्वारा आफ्नो जीत गुणा। तर यदि तपाईंको जुवा गलत छ भने, तपाईं स्पिन राउन्डको लागि पुरस्कार गुमाउनुहुनेछ।
सुन्दर तितलीहरू सधैं मानिसहरूको आँखा खुर्छन्। हामी तिनीहरूलाई प्रशंसा गर्छौं, किनकि तिनीहरू धेरै नाजुक र राम्रो छन्। यो स्लॉट खेल यी सुन्दर जीवहरूलाई समर्पित गरिएको छ। तपाईंले सुन्दर डिजाइन देख्नुहुनेछ र मीठा संगीत सुन्नुहुनेछ। तितली स्लॉट खेल खेल्न, कृपया, बोनस एक्स्प्रेस भ्रमण गर्नुहोस् र त्यहाँ नयाँ भिडियो स्लटको ठूलो विविधता बीच पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईले सिर्जना गरिएको स्लटहरूको प्रशंसक हुनुहुन्छ NextGen गेमिङले हाम्रो नि: शुल्क स्लॉट अनलाईनका लागि हाम्रो वेबसाइटमा अनलाइन खेल्दछ! मोबाइल उपकरणहरूमा स्लट खेल खेल्न मनपर्ने व्यक्तिहरूको लागि जानकारी: ब्रोफ्लाइ स्लट्स र अन्य नि: शुल्क मोबाइल स्लटहरूको मोबाइल संस्करण खेल्न, बोनस एक्सप्रेसमा कुनै डाउनलोड आवश्यक छैन!
पुतलीहरु अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.1 रैपिड रील्स
2.0.0.2 ग्रह देखि आक्रमणकारियों
2.0.0.3 ला रौज
2.0.0.4 शाओलिन स्पिन
2.0.0.5 ठूलो 88
2.0.0.7 ब्लैकज्याक प्लेयरहरू छनोट
2.0.0.8 ड्रैगन सम्राट